Maqaa ‘ABO-Shaneen’ Daa’imman Hidhaman haa Hiikaman.|OROMSIIS ONLINE
Haalli qabiinsa hidhamtootaa manneen hidhaa naannoo Gambeellaa keessa jiranii ariitiin fooyya’uu akka qabu Komiishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa hubachiise.
Keessumaa ijoolleen sadi dhiirota lama kan umuriin isaanii ganna 11 fi 12 akkasumas mucaan dubaraa ganna 14 miseensa ‘ABO-Shanee’ ta’uu shakkamuun magaalaa Gambeellaa keessatti hidhamanii jiran ariitiin akka gadi dhiifaman komiishinichi gaafateera.
Ijoolleen dhiiraa lamaan kan ganna 11 fi 12 humnoota nageenyaan akka malee reebamuu hime gabaasni komiishinichi baase.
Kanneen ijoollee kanarratti reebicha raawwatan ariitiin qoratamanii tarkaanfiin akka irratti fudhatamus gaafateera.
Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa dhaabbata mootummaa Itoophiyaan hundaa’e yoo tahu, aangoo sarbama mirgoota namoomaa qorachuufi biroon itti kennameera. Komishinichi dhiibbaa mootummaarraa bilisa akka tahes hima.
Gabaasni maal hima?
Komishinichi Mudde 12 – 15 bara 2013 A.L.I naannoo Gaambeellaa keessa socho’uun qabiinsa hidhamtootaa fi paartileen mormitootaa hagam bilisaan socho’uu akka danda’an xiinxaluu hima.
Addatti manneen hidhaa magaalaa Gaambeellaa fi Godina Anyuwaa keessa jiran daawwachuun qabiinsa mirgoota namoomaa ilaalchisee hogganoota naannichaa waliin mari’achuus hima.
Daa’imman miseensa ‘ABO-Shanee’ ta’uun shakkamanii walakkeessa Muddee irraa hidhaa jiran kunneen hanga Wiixata gabaasi kun bahuutti hin hiikamne jedhe komiishinichi.
Naannicha keessatti haalli qabiinsa hidhamtootaa fi mirgi bilisaan socho’uu paartilee mormitootaa fooyya’uu dhabuun akka isa yaaddesses komiishinichi beeksiseera.
Dabalataan TPLF maallaqaa fi karaa adda addaan deeggartu, akkasumas uummata jidduutti walitti bu’iinsa kakaasuuf yaaltan jedhamuun dhalattoonni Tigraay 90 ta’an hidhaa jiraachuu gabaasi komiishinichi Wiixata baase ni mul’isa.
Namoonni kunneen poolisii federaalaanis ta’e kan naannichaan qorannoon akka irratti hin eegalamne hime.
Komiishinichi wayita daawwannaa godhetti qorannoon akka eegalamu, hagasittuu mirgi wabii isaanii eegameefi akka gadi dhiifaman hubachiisus hanga ammaa gadi hin dhiifamne jedhe.
Komiishinarri Komiishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr Daani’eel Baqqalaa, “wantoonni xiyyeeffannoo mootummaa Gaambeellaa barbaadan hedduun jiraatanillee, dhimmi daa’imman hidhamanii fi namoota mirga wabii malee hidhaa jiranii xiyyeeffannaa hatattamaa barbaada,” jedhan.
Dhimma paartilee mormituu …
Gama kaaniin komishinichi paartilee mormitootaa kan haasofsiise yoo ta’u, bilisaan akka hin sochoone dhiibbaan adda addaa irratti godhamaa akka jiru hubachuu beeksiseera.
Waajjira banatanii socho’uu dhabuu fi miseensonni isaanii jalaa hidhamuu fi doorsifamuun rakkinoota paartileen mormituu naannichaa himatan keessaati.
Namooti sababa miseensi maatii isaanii paartii mormituu keessa jiraniif qofa hojiirraa ari’aman jiraachuu fi kanneen fedhii isaanii malee ‘paartii Badhaadhinaaf buusii buusaa’ jedhamanii miindaa isaaniirra maallaqni citu jiraachuus himeera.
Dhimmi buusii paartii Badhaadhinaa komishinichi hogganoota naannichaa waliin marii taasisee booda sirreeffamuu komishinichi beeksiseera.
Haa ta’u malee gama qabiinsa hidhamtootaa, eegumsa mirgoota namoomaa fi mirga bilisaan socho’uu paartilee siyaasaa irratti ammallee mootummaan naannichaa fi kan federaalaa tarkaanfii sirreeffama fudhachuu akka qabu komishinichi hubachiisee jira.
SBO Onkoloolessa 23,2016. Oduu, Gabaasa Tarkaanfii Waraanaa fi Gaaffii fi deebii A/50 miseensa poolisii federaalaa Kumalaa Jabeessaa waliin godhame
Breaking: Ibsa Hayyyy Duree Gumii Sabaa Jaal Daawwid Ibsaa Irraa Kenname